धोनी बीसीसीआईको ‘कन्ट्रयाक्ट’बाट ‘आउट’ – Kathmandutoday.com
धोनी बीसीसीआईको ‘कन्ट्रयाक्ट’बाट ‘आउट’
काठमाण्डु टुडे २०७६ माघ २ गते १७:१९ मा प्रकाशित
एजेन्सी–भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड बीसीसीआईले आफ्नो वार्षिक अनुबन्धनबाट पूर्व कप्तान महिन्दर सिंह धोनीको नाम हटाएको छ ।
बीसीसीआईले २७ खेलाडी विभिन्नग वर्गमा समावेश गरिएको सूची सार्वजनिक गरेको छ । उक्त सूचीमा पूर्व कप्तान धोनीको नाम छैन् ।
बीसीसीआईले सार्वजनिक गरेको सूचीको ए प्लस श्रेणिमा मात्र तीन जना खेलाडी छन् । कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा र तिब्र गतिका बलर जसप्रित ए प्लस श्रेणिमा अटाएका छन् । ए प्लस श्रेणिका खेलाडीले वार्षिक सात करोड पाउँछन् ।
ए श्रेणिमा ११ खेलाडी सहभागी छन् । रबिचन्द्रन अश्विन, रबिन्द्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, चेतेश्वर पूजारा, अजिन्क्यै रहाने, लोकेश राहुल, शिखर धवन, मोहम्मद सामी, ईशान्त शर्मा, कुलदीप यादब र ऋषभ पन्त उक्त श्रेणिमा छन् । ए श्रेणिका खेलाडीले बीसीसीआईसँग वार्षिक पाँच करोड रुपियाँ लिन्छन् ।
अष्ट्रेलिया विरुद्धको मेलबर्न टेष्टमा डेब्यु गरी उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका मयन्क अग्रवाल भने ठूलो फड्को मार्दै बी श्रेणिमा पुगेका छन । उक्त श्रेणिका खेलाडीले तीन करोड भारतीय रुपियाँ पाउनेछन् ।
सी श्रेणिमा झरेका विकेटकीपर ब्याट्सम्यान ऋधिमन साहले भने स्तरोन्नती गरी बी श्रेणिमा फर्किएका छन । उमेश यादब, युज्वेन्द्र चाहल, हार्दिक पाण्ड्या साह र अग्रवालसँगै समूह बी मा परेका छन् । बी श्रेणिमा पर्ने खेलाडीले वार्षिक तीन करोड पाउनेछन् ।
अम्बाटी रायडू, दिनेश कात्र्तिक र खलील अहमद पनि बीसीसीआईको अनुबन्धनको परिधिबाट बाहिरिएका छन् । तीनैजनाले आफ्नो स्थान बनाउन सकेनन ।
नवदीप सैनी, दीपक चाहर, श्रद्धुल ठाकुर, श्रेयस ऐयर र वाशिंगटन सुन्दरले भने सी श्रेणिमा अनुबन्ध भएका छन् । केदार जाधर, मनिष पाण्डे, हनुमा बिहारी पनि सी श्रेणिमै परेका छन् ।
सन् २०१९ को सूचीमा कप्तान धोनीलाई पहिलो श्रेणिमा राखिएको थियो । २०१९ मा विश्वकप सम्पन्न भए यता धोनीले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय स्पर्धामा सहभागी भएका छैन्न ।
भारतले न्युजिल्याण्ड विरुद्ध विश्वकप क्रिकेटको सेमीफाइनल खेल्दा धोनी उक्त टोलीको सदस्य थिए । प्रशिक्षक रबि शास्त्रीले भने विश्वकप टी ट्वान्टी क्रिकेट टोलीका सम्भावित खेलाडीको रुपमा अझै पूर्व कप्तान धोनी यथावत रहेको जोड दिए ।
काठमाण्डु उपत्यकामा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा घोषणा
ओली सरकारमा १० नयाँ मन्त्री थपिँदै, को–को हुँदैछन् आउट ?
कोरोनाले एउटै घरमा चार जनाको काल !
श्रीमती र छोराको हत्यापछि सुदीपले गरे आत्महत्या
नेपालमा ठ्रूलै भूकम्प, मज्जैले हल्लियो काठमाण्डु
गणेशमान सिंहकै प्रेरणा र मार्गदर्शनले सानो उमेरमै राजनीतिमा होमिए : सभापति देउवा
संक्रमित बढेसँगै निको हुनेको संख्या पनि ४३ हजार नाघ्यो
काठमाण्डु उपत्यका कोरोनाको महामारीमा, आज मात्रै ८ सय ५९ जनामा संक्रमित
नेपालमा आज अहिलेसम्मकै उच्च कोरोना संक्रमित भेटियो
सुदूरपश्चिममा जबरजस्ती करणीका घटना बढ्दो